के ‘एचसीक्यू’ले कोभिड–१९ निको पार्छ ? – Himal FM 90.2 MHz
के ‘एचसीक्यू’ले कोभिड–१९ निको पार्छ ?
बिचार – बिमर्श adminhimal April 18, 2020
सोलुखुम्बु, वैशाख ६
अहिले विश्वभर कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट संक्रमित भएकाहरुको उपचारका लागि औषधिको खोजी भइरहेको छ । केही औषधिको नाममा चिकित्सक, वैज्ञानिक, औषधि विज्ञहरुले अनुसन्धान तथा बहस गरिरहेका छन् । त्यस्ता औषधिमध्ये सबभन्दा बढी सुनिएको नाम हो, ‘हाइड्रोक्सिक्लोरोक्वीन (एचसीक्यू)’ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एचसीक्यूले अद्भूत काम गर्ने ठोकुवा गरेपछि यसले झन् बढी चर्चा पाएको हो। ट्रम्पले यसबारे फ्रान्सेली चिकित्सक टोलीले अध्ययन गरेको बताउँदै यो औषधिको प्रशंसा गरेका थिए। ट्रम्पले एउटा विज्ञान जर्नलमा प्रकाशित जुन लेखलाई आधार मानेर यो ठोकुवा गरेका थिए, अहिले त्यो लेखको अध्ययन र तथ्यमाथि नै प्रश्न उठिसकेको छ।
लेख प्रकाशित गरेको इन्टरनेसनल सोसाइटी अफ एन्टीमाइक्रोबियल किमोथेरापी (आईजेएए) ले एक विज्ञप्ती प्रकाशित गरी प्रकाशित लेखले सोसाइटीको मापदण्ड पुरा नगरेको उल्लेख गरेको छ।
विश्वको औषधिबजार अहिले एचसीक्यूको प्रयोग गर्न हुने/नहुने भनेर तातेको बेला नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहने कुरै भएन। नेपालमा पनि यसको प्रयोग गर्न हुन्छ वा हुन्न भन्नेमा चिकित्सक समाज विभाजित छ।
केही साताअघि चीन सरकारले सहयोग गरेको औषधीको सूचीमा ४०० बाकस ‘क्लोरोक्विन’ पनि थियो। यस्तै, नेपाली औषधि उत्पादक कम्पनी देउराली जनताले सरकारलाई यसको १ लाख ट्याब्लेट सहयोग पनि दिइसकेको छ भने भारत सरकारले पनि १० लाख ट्याब्लेट सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ।
नेपालमा हालसम्म कोरोना भाइरसबाट संक्रमित देखिएपनि गम्भीर बिरामी नदेखिइसकेको अवस्थामा कुन औषधि कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बहस सतहमा आएको छैन। यद्यपि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले हाइड्रोक्सिक्लोरोक्वीन (एचसीक्यू) नामक औषधिलाई कोभिड–१९ को उपचार अन्तरिम गाइडलाइनमा उल्लेख गरेको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले आजको मितिसम्म कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि कुनै पनि औषधिलाई मान्यता दिएको छैन। तर, बिरामीको लक्षणका आधारमा उपचार गर्नका लागि सम्बन्धित देशको कानुनअनुसार औषधि प्रयोगका लागि भने छुट दिएको छ।
यस्तोमा चिकित्सा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय काउन्सिलले ‘एचसीक्यू’ प्रयोग गर्न विभिन्न मापदण्डहरु तय गरेको छ। काउन्सिलको गाइडलाइनमा एचसीक्यूको प्रयोगबारे स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्दै संक्रमणका कारण ६० वर्षमाथिका गम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई विभिन्न जटिलता र पूर्ववत रोगहरु रहेको अवस्थामा यसको प्रयोग गर्न छुट दिएको छ।
गाइडलाइन निर्माणमा संलग्न डा.अनुप सुवेदीले एचसीक्यू अन्तिम अवस्थामा भएका बिरामीमा चिकित्सकको सुझबुझका आधारमा मात्र प्रयोग गर्नका लागि उल्लेख गरिएको स्पष्ट पारे। ‘एचसीक्यूले प्रयोगशालामा कोभिड–१९ को भाइरसविरुद्ध राम्रो नतिजा दिएको छ। तर, त्यसको मतलब मानिसको शरिरमा पनि यसले त्यसैअनुरुप काम गर्छ भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘तर, विभिन्न देशमा स–साना अनुसन्धानमा यसले केही आशा भने देखाएको छ।’
उनका अनुसार एउटा उमेर पार गरिसकेको र विभिन्न प्रकारका रोग लागेको अवस्थामा कोभिड–१९ संक्रमणका कारणले झनै गम्भिर अवस्थामा पुगेका बिरामीलाई अन्तिम विकल्पका रुपमा एचसीक्यू दिन सकिन्छ। ‘यो सामान्य बिरामीको उपचारका लागि होइन। अन्य रोगमा पनि यसको प्रयोग भइरहेको छ। त्यसैले धेरै नै नकारात्मक धारणा बनाउन जरुरी छैन,’ सुवेदीले भने, ‘तर यसको नियमन गर्न भने जरुरी छ। बाथ तथा लुपुस रोगका बिरामीका लागि यो आवश्यक औषधि हो। जथाभावी बिक्री हुँदा उनीहरुका लागि सर्टेज हुनसक्छ।’
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा.भगवान कोइरालाले एचसीक्यूलाई अन्तरिम गाइडलाइनमा राखेर फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने चिकित्सकहरुका लागि उपचार गर्ने बाटो सहज मात्र बनाइदिएको धारणा राखे। ‘अहिले विश्वमै कुन औषधिले काम गर्छ भन्ने यकिन छैन। यस्तोमा के गर्ने त?’ उनले भने, ‘यो औषधिको प्रयोगलाई हामीले सर्वथा ठिक भनेका छैनौं। यसको मतलब यसको प्रयोग गलत हो पनि भन्न खोजेका होइनौं।’
साथै उनले एचसीक्यूलाई प्रोफोल्याक्सिस (बचाउ) गर्ने औषधिको रुपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्नेमा काउन्सिल स्पष्ट रहेको बताए। ‘हामीले भारतमा जस्तो यसलाई प्रोफोल्याक्सिसका रुपमा प्रयोग गर्न हुँदैन भनेका छौं,’ उनले भने, ‘तर, अस्पतालमा गम्भीर अवस्थामा भर्ना भएका बिरामीलाई केही त दिन्छ चिकित्सकले। त्यसमा उसको जज्मेन्टको पनि कुरा आउँछ। त्यस्तोमा महामारीको बेला भविष्यमा यही औषधिको प्रयोगका कारण धेरै विवाद नहोस् भनेर हामीले चिकित्सकको हित हेरेका हौं।’
औषधि व्यवस्था विभाागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालका अनुसार भने यस औषधिको प्रभावकारिताबारे केही पनि स्पष्ट रुपमा नआएकोले एचसीक्यूबारे अहिले नै केही निर्णय गर्ने अवस्था छैन। ‘अनुसन्धानले प्रमाणित गरेर केही आधार फेला परे भविष्यमा नेपालमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यस औषधिका बारेमा कुरा त चलेको छ तर, उपचारमै जाने भनेर स्वीकृत भएको छैन।’
काउन्सिलका अध्यक्ष कोइरालाका अनुसार भने बजारमा पहिलादेखि नै विक्री वितरण भइरहेको औषधिलाई विज्ञहरुको रायका आधारमा प्रयोग गर्न पाइने भएकाले यसको प्रयोगलाई अन्तरिम गाइडलाइनमा समावेश गरिएको हो। ‘अमेरिकामा अफ लेबल ड्रग्स भन्छन्। हामीकहाँ ठ्यक्कै त्यो छैन। तर विज्ञहरुको रायका आधारमा बजारमा पाइने औषधि उपचारका लागि प्रयोग गर्न पाइन्छ,’ उनले भने, ‘भोली यसको फाइदाभन्दा धेरै हानी छ भन्ने कुरा आयो भने गाइडलाइन परिवर्तन गर्छौं। त्यसमा केही अप्ठेरो मान्नुपर्ने कुरा छैन।’
प्रमाणमा आधारित उपचार पद्धति (ईबीएम) का अनुसन्धाता एवम् क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. विशाल ज्ञवालीका अनुसार, हालसम्म विभिन्न जर्नलहरुमा प्रकाशित अनुसन्धानात्मक लेखका आधारमा हाइड्रोक्सिक्लोरोक्वीनले कोभिड–१९ का बिरामीलाई फाइदा गरेको भन्ने यथेष्ट प्रमाण भेटिएको छैन। यस्तोमा एचसीक्यूको प्रयोग गर्नु उपयुक्त नहुने उनको तर्क छ।
‘जुन फ्रेन्च पेपरलाई आधार मानेर यसबारे यति धेरै बहस भइरहेको छ, त्यो काम नलाग्ने थियो भनेर त जर्नल प्रकाशित गर्ने सोसाइटीले नै भनिसकेको छ। यस्तै अर्को फ्रेन्च पेपरले यसले काम गर्दैन भनिसकेको छ। अर्को चिनियाँ पेपरको निष्कर्ष पनि त्यही छ,’ डा. ज्ञवालीले भने, ‘यस्तोमा यो औषधि कोभिड–१९ का बिरामीमा राम्रो काम गर्छ भन्ने प्रमाण देखिन्न।’
उनले बिरामीको उपचारका लागि प्रमाणित तथ्यहरुलाई मात्र आधार मान्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रकाशित तथ्यहरुको राम्रोसँग विश्लेषण गरेर मात्रै औषधि के चलाउने भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने बताए। उनको अनुसार अहिले महामारीले विश्व नै आक्रान्त बनाएको अवस्थामा काउन्सिलले गाइडलाइन प्रकाशित गरेर भने सराहनीय कार्य गरेको बताए।
‘माथिल्लो तहमा बसेर निर्णय गर्नेहरुलाई पनि प्रमाणित तथ्यहरुको विश्लेषण गर्न गाह्रो हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘तर अप्रमाणित कुरालाई इण्डोर्स गर्नु हुँदैन।’
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका चिकित्सक तथा रिसर्च युनिटका संयोजक डा. शेरबहादुर पुनले यस औषधिको कोरोना भाइरसको उपचारका लागि प्रयोग भएको जानकारी आफूले नपाएको बताए।
‘कोरोना भाइरसको संक्रमणको उपचार गर्ने औषधि हालसम्म फेला परेको छैन। हामीले कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचार गर्दा एन्टिबायोटिक तथा एन्टिभाइरल औषधिको प्रयोग भने गर्छौं,’ उनले भने, ‘साँच्चिकै यो हाइड्रोक्सिक्लोरोक्वीनले काम गर्ने हो कि होइन प्रमाणित भइसकेको छैन, अनुसन्धान भइरहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि यसको मान्यता दिएको छैन।’ उनको अनुसार यो एन्टिमलेरियन औषधिको परीक्षण नै गर्नका लागि पनि नेपालमा धेरै संक्रमित पनि छैनन्।
कोभिड–१९ संक्रमितको उपचारका लागि हब अस्पताल तोकिएको सिभिल अस्पतालका चिकित्सक डा. विदेश विष्ट पनि अब केही जर्नलहरुमा हाइड्रोक्सिक्लोरोक्वीनले फाइदा नगर्ने रिपोर्टहरु प्रकाशित भइसकेको अवस्थामा उपचारमा यसको प्रयोग गर्न नहुने तर्क गर्छन्।
हालसम्म हाइड्रोक्सिक्लोरोक्वीनले कोरोना भाइरसको उपचार र संक्रमण रोक्न सहयोग गरेको तथ्य फेला परेको छैन। तर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले बारम्बार यसको प्रयोग गर्न सिफारिस गरिरहेका छन्। उनले एचसीक्यूको निर्यात प्रतिबन्ध नखोले त्यसको प्रतिवाद गर्ने धम्की दिएसँगै भारतीय प्रधानमन्त्रीले मोदीले यो औषधी अमेरिकातर्फ लैजान दिए। यसले पनि विश्वभर एचसीक्यूतर्फ धेरैको ध्यानाकृष्ट गरेको छ।
राजनीतिक कारणले गर्दा अमेरिकी राष्ट्रपतिले औषधिलाई मान्यता दिएपछि भारतले पनि त्यही बाटो पछ्याएका कारण नेपालमा यसको प्रयोग गर्नहुन्छ भन्ने धारणा बनेको हुनसक्ने धारणा डा विष्टले राखे।तर काउन्सिलका अध्यक्ष डा. कोइरालाले भारतीय मापदण्डलाई हेरेर काउन्सिलले गाइडलाइन नबनाएको स्पष्ट पारे। ‘हामीले भारतलाई हेरेर गाइडलाइन बनाएको भए त प्रोफोल्याक्सिसलाई पनि मान्यता दिन्थ्यौं नि,’ उनले भने, ‘हामीले त्यो त गरेका छैनौं। यो केसमा हामीले हामीलाई के चाहिन्छ र के गर्न सक्छौं भनेर हेरेका हौं। यसमा अवश्य पनि बहस हुनसक्छ।’
के हो हाइड्रोक्सिक्लोरोक्वीन ?
यो औषधि दशकौँअघि मलेरियाको उपचारका लागि स्वीकृत गरिएको औषधि हो। यसले अटोइम्युन डिजिज जस्तै लुपस र बाथको उपचारमा पनि प्रयोग हुन्छ। यो प्लेक्वीनिल र क्लोरोक्वीन भन्ने ब्रान्ड नामबाट चिनिन्छ।
यो औषधिलाई कोरोनाको उपचारमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नुमा विभिन्न कारणहरु छन्। केही शोधकर्ताहरुले प्रयोगशालामा गरेको परिक्षण र अनुसन्धान गरेर प्रकाशित गरेको लेखमा क्लोरोक्वीनले कोरोना भाइरसलाई मानव कोषहरु प्रवेश गर्न नदिने दाबी गरिएको छ। तर, प्रयोगशालाको टेस्ट ट्युबमा राम्रो आशा जगाएको यो औषधिले मानव शरीरमा भने आशातित कार्य गरेको पाइएन। यो औषधिले इन्फ्लुएन्जा र अन्य भाइरसको संक्रमण निको पार्छ भन्ने पनि पुष्टि हुन सकेको छैन।
चीन र फ्रान्सका चिकित्सकहरुको आँकलनअनुसार यो औषधि एन्टिबयोटिक एजिथ्रोमाइसिनसँग मिलाएर दिँदा बिरामीलाई ठिक पार्न सक्छ। तर उनीहरुको अध्ययन त्यति विश्वासयोग्य भने छैन। चीनमा गरिएको एक अध्ययन अनुसार हाइड्रोक्सिक्लोरोक्वीनले सामान्य अवस्थामा रहेका कोभिडका बिरामीलाई ठिक पार्नसक्छ। तर, यसमा थप अध्ययन आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाइ छ।
कोरोना संक्रमित बिरामीमा ओभरएक्टिभ इम्युन सिस्टमलाई रोक्न मद्दत गर्ने भएकाले पनि यो औषधिको प्रयोगमा जोड दिने गरिएको छ। कोरोनाका सिकिस्त अवस्थाका बिरामीमा इम्युन सिस्टम ओभरड्राइभ हुनसक्छ र यसले कलेजो तथा अरु अंगमा क्षति पुर्‍याउन सक्छ।
तर यो औषधिले कोरोना भाइरसको संक्रमण नै रोक्न सक्छ भन्ने तथ्यचाहिं फेला परेको छैन। यद्यपि अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ मिनिसोटाले यो औषधि मानिसमा परीक्षण गर्दैछ। यस्तै पेन्टागनले पनि अमेरिकी सेनाका जवानहरुमा यो औषधिको ‘ट्रायल’ गरिरहेको छ। साथै अन्य केही स्थानमा पनि यसका विभिन्न प्रकारका ट्रायलहरु भइरहेका छन्।
[email protected]l.com, [email protected], [email protected]